Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်)
Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ထုံထိုင်းခြင်းကြောင့် အလွန်အမင်းအိပ်ခြင်းကိုကိုသရာမှာနဲ့ အခြားအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ (အိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်းအသက်ရှူရပ်ခြင်းကာလများ ကဲ့သို့သော)ကုသရာမှာသုံးပါတယ်။ သင့်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့တွေရှိနေရင် ထိုနာရီတွေအတွင်း နိုးကြားနေအောင်လည်း ကူညီပေးပါတယ်။
ဒီအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ပျောက်ကင်းအောင်မကုပေနိုင်သလို သင့်ရဲ့အိပ်ချင်နေစိတ်ကို လုံးဝတော့မဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါဘူး။ လုံလုံလောက်လောက်အိပ်စက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အသုံးမပြုပါဘူး။ မောပန်းခြင်းကိုကုသရန်နဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာမရှိတဲ့လူတွေမှာ အိပ်စက်ခြင်းနည်းအောင်အတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်းအိပ်ချင်နေခြင်းအတွက် – အစာမပါဘဲသို့အစာနဲ့တွဲပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း မနက်ပိုင်းတစ်ကြိမ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကညွန်ခဲ့ရင် တစ်နေ့စာပမာဏကို မနက်ပိုင်းတစ်ကြိမ်၊ ညနေပိုင်းတစ်ကြိမ်ခွဲပေးသင့်ပါတယ်။
အိပ်နေစဉ်အသက်ရှူရပ်ခြင်းအတွက်- အစာမပါဘဲသို့အစာနဲ့တွဲပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း မနက်ပိုင်းတစ်ကြိမ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကရပ်ဖို့မပြောသေးမချင်း CPAP machine, mouth deviceကဲ့သို့သော အခြားကုသမှုတွေကို ဆက်အသုံးပြုပါ။
အစာမပါဘဲသို့အစာနဲ့တွဲပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း အလုပ်ညဆိုင်းနေ့ဆိုင်းမပြောင်းခင် ၁နာရီအလိုမှာ တစ်နေ့တစ်လုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဆေးစွဲသွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားလုူတွေနဲ့အထူးသဖြင့် ဆေးစွဲဖူးတဲ့လူတွေနဲ့မျှဝေသုံးစွဲခြင်းကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အခြားလူတွေမရယူနိုင်တဲ့နေရာမှာ ဆေးကိုထားသင့်ပါတယ်။ ရောင်းချခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းတွေက တရားမဝင်ပါဘူး။
Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Provigil® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
modafinil or armodafinil (Nuvigil).ဆေးတွေကြောင့် ဓါတ်မတည့်မှုများအဖိမ့်များဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
စိတ်ချရမှုရှိမရှိသေချာချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုအောက်ပါအချက်တွေကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
သွေးတိုးခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးဖောက်ဖူးခြင်း
ကိုယ်ဝန်တားခြင်းင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်သွားစေးပါတယ်။ ဟော်မုန်းကိုယ်ဝန်တားဆေးများ ( တားဆေးများ၊ ထိုးဆေးများ၊ ယောနိအတွင်းထည့်သွင်းရသည့်ပစ္စည်းများ၊ အရေပြားကပ်ခွာများ ၊ ယောနိဆိုင်ရာကွင်းများ) ဒီဆေးအသုံးပြုနေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ကိုတားနိုင်ဖို့အတွက်အကျိုးသိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီဆေးအသုံးပြုနေချိန် ကိုယ်ဝန်တားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း
စိတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ သတ်သေလိုသသည့်အတွေးများ၊ ကြိုးပမ်းမှုများ
ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ အတွေးများအပြုအမူများမူမမှန်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ အရင်ကထက်ပိုတက်ကြွခြင်းစကားပိုများခြင်း
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း
ဆေးရုံတက်ရောက်ရတဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့အရေပြားတုန့်ပြန်မှုတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အရေပြားအဖိမ့်များအင်ပျဉ်များထခြင်း၊ ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ကွာကျခြင်း
မျက်နှာ၊ မျက်လုံး၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းရောင်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဒါတွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ သင်မှီဝဲနေတဲ့ ဆေးစာရင်းတွေကို ဆရာဝန်တွေဆေးဝါးတတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေကိုပြော ပြထားသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆေးရပ်လိုက်တာမျိုးတွေဆေးစသောက်တာမျိုးတွေ ဆေးပမာဏပြောင်းတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အပြန်အလှန်သက်ရောက်နိုင်တဲ့ဆေးတွေကတော့ street drugs (such as methamphetamine, MDMA/” ecstasy” ).
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
200သောက်ဆေးနေ့စဉ် အလုပ်အချိန်မပြောင်းခင် တစ်နာရီကြိုပြီး
ကလေးတွေအတွက် Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Provigil® (ပရိုဗင်ဂျေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား- modafinil 100mg